LA LIGA: Kooxda Barcelona oo ku sii dhowaanaysa Real Madrid kaddib guul ay ka gaartay Real Sociedad, xilli Lionel Messi uu labo jeer shabaqa tagay… + SAWIRRO – Gool FM
LA LIGA: Kooxda Barcelona oo ku sii dhowaanaysa Real Madrid kaddib guul ay ka gaartay Real Sociedad, xilli Lionel Messi uu labo jeer shabaqa tagay… + SAWIRRO
Haaruun Yuusuf April 15, 2017
(Barcelona) 15 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa guul ka gaartay naadiga Real Sociedad oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Camp Nou, kulan ka tirsan horyaalka La Ligaha Spain.
Barcelona ayaa goolasha la horreysay waxaana labo gool oo is xigay u dhaliyey 17’daqiiqo iyo 37’daqiiqo weeraryahankooda Lionel Messi, Barca ayaana kulanka ku hoggaamisay 2-0.
Kooxda Real Sociedad ayaa hal gool iska soo guday waxaana kubbad lagu tuuray goolahaya Barca isla markaana ka soo bootay markale lagu labo celiyey, isla markaana inta goolhayaha markale ku dhacday oo gudubtay ku sii dhacday 43’daqiiqo difaaca Barcelona ee Samuel Umtiti sidaasna shabaqa ku gashay, goolkaas ayaana noqday mid uu iska dhaliyey Umtiti oo ah (Own goal), kulanka waxa uu sidaa ku noqday 2-1 ay ku gacan sarreysay Barca.
Barcelona ayaa dhalisay goolkeeda saddexaad ee ciyaarta waxaana 44’daqiiqo u dhaliyey Francisco Alcacer, kaddib baas hagaagsan oo uu ka helay Lionel Messi, waxaana kulanku sidaas ku noqday 3-1 ay gacanta sare ku lahayd Barca oo gurigeeda joogta.
Dhammaadkii qeybtii hore ee ciyaarta intii lagu guda jiray daqiiqadii lagu kordhiyey ciyaarta Barcelona ayaa gool kale laga dhaliyey waxaana kubbad karoos ahayd oo uu Willian Jose ka dul qaaday difaacyada Barca u dhaliyey kooxda Real Sociedad Xabier Prieto, kulanka ayaana lagu kala nastay 3-2 ay ciyaarta ku hoggaaminaysay Barcelona.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay ayaa fursado goolal loo filan karay isla isku helay labada dhinac, laakiin kooxna uma suurto gelin inay shabaqa gaarto kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-2 ay ku adkaatay Barcelona.
Kooxda Barcelona ayaa sidaasi ku dhafisa kaalinta labaad ee kala horreynta horyaalka La Ligaha Spain iyadoo leh 72-dhibcood, kaddib 32 kulan oo ay ciyaartay waxaana ay 3 dhibcood u jirtaa kooxda hoggaanka u haysa horyaalka ee Real Madrid oo leh 75-dhibcood, isla markaana kulan baaqi u yahay.
Maamulka iyo shaqaalaha Gool FM oo Tahniyad dhalasho u diyaraya Liibaan Fantastic
Real Madrid waa boqorada soo kabsashada (Comeback Kings)